Kopisha ikhofi 3d umshini wokuphrinta China Manufacturer
Incazelo:Umshini wephrinta yekhofi 3d,Machine Printer Machine Ukudayiswa,Umshini wokuphrinta we-Cafe
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Macaron Printer > Kopisha ikhofi 3d umshini wokuphrinta
I-Model No.: RFA3S
ikhofi yomshini we-3d iphrinta uhlobo olusha lwephrinta ye-inkjet eqondile yokushicilela okunamandla, isebenza njengeprinta yezinkinobho zendabuko, yenza ukuphrinta ngokunyathelisa ngokuqondile kwe-inkjet, kodwa ngenxa yokuphakamisa kwayo i-flatbed, iyakwazi nokuphrinta cishe kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle amaphepha, njengamaqebelengwane, izinkuni, izinsimbi, iplastiki, isikhumba, nezinye izembatho, indwangu, njll.
Umshini wokupakisha wekhofi ufanelekile ngekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
Isingeniso kwekhofi isithombe iphrinta 2017Color digital ikhofi ukhilimu iphrinta inezici eziningi ezinamandla. Kungaphrinta ubuso bomakhasimende noma amagama abafuna ukuwaveza phezu kwekhofi / isinkwa / amabhisikidi. Ukushicilela imininingwane ebusweni kumshini wokunyathelisa uswidi kuyindlela emisha yokwenza ubuciko be-latte, kusho ukuthi akudingeki usebenzise isikhathi esiningi sokufunda nokusebenzisa ubuciko be-latte, udinga ukuthatha isithombe bese iphrinta qedela konke
Umshini wokuphrinta we-cafe -Automatic machine
ikhofi, ama-milkshakes, ama-biscuits, ama-pastries, ama-macaroons nezinye izinto eziningi ezenzakalweni ezingavamile. Yenza i-owm yakho design, isithombe, i-Emoji, Imilayezo kukhofi yakho oyintandokazi, u-milkshakes, ama-Macroons, ama-Biscuites, amaqebelengwane, i-Chocolate ETC.Usebenzisa ubuchwepheshe bokushicilela obunikazi bomshini umshini wenza ukunyathelisa okuphefumulelwe kunoma yisiphi isithombe noma umbhalo odwebeni lwesiphuzo sekhofi. Yakha isikhashana futhi uhlanganise uxhumano namakhasimende akho.
ikhompiyutha yomhlaba wekhofi isetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Izinemibala engu-6 engayinyathelisa izithombe ezimibalabala nezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi.
Izigaba zomkhiqizo : Iphrinta yokudla > I-Macaron Printer
Iphrinta engu-3d ye-tshokolethi nokudla Xhumana Nanje
iphrinta yomshini wokwenza ikhofi Xhumana Nanje
ikhofi ye-coffee ripples Xhumana Nanje
Kopisha ikhofi 3d umshini wokuphrinta Xhumana Nanje
ikhofi yezithombe izithombe zephrinta Xhumana Nanje
intengo yomshini wephrinta yomshini Xhumana Nanje
Shintsha isithombe sephrinta yekhofi Xhumana Nanje
Qhubeka kabusha ikhofi yezithombe zephrinta Xhumana Nanje
Umshini wephrinta yekhofi 3d Machine Printer Machine Ukudayiswa Umshini wokuphrinta we-Cafe Umshini wephrinta yebhakhodi Umshini wephrinta yebha Umshini wephrinta wekhofi u-Alibaba Umshini wephrinta yamakholi wefoni Umenzi wephrinta ye-3d